Calafka Xoolaha Oo La gaadhsiiyay Degmoyinka Gobolka Doolo - Cakaara News
Calafka Xoolaha Oo La gaadhsiiyay Degmoyinka Gobolka Doolo
Jigjiga (cakaaranews)Isniin 24ka July 2017. Xafiiska xoolaha iyo horumarinta reer guuraaga DDSI ayaa calafka xoolaha gaadhsiiyay qaarkamid ah bulshada xoola dhaqatada ah ee kudhaqan degmooyinka kala ah Donod, daratoole bookh iyo galxamur oo katirsan gobolka doolo.
Hadaba, calafkan xoolaha oo ah nooc casri ah ayaa waxaa kawarbixiyay khabiiro kasocday xafiiska xoolaha iyo horumarinta reerguuraaga oo sheegay in calafkani yahay calaf tayo leh islamarkaana xooluhu ay kahelaan nafaqo farabadan. Waxayna intaa kudareen in isticmaalka calafkan xoolaha ay tababaro kaladuwan kusiiyeen bulshada degmooyinkaas. Xubnahan khabiirada ah ayaa tilmaamay in xafiisku uu da’daalo balaadahan ugu jiro tayaynta xoolaha deegaanka si bulshadu uga hesho cad iyo caano fiican.
Waxayna carabka kudhufteen in calafkan xoolaha ee lasoo gaadhsiiyaybulshada uu san ahayn kii ugu horeeyay marar badan oo kaladuwana uu soo gaadhsiiyay xafiisku.
Ugudanbayna, bulshadii lagaadhsiiyay calafkan xoolaha ee kudhaqnayd degmooyinkaas ayaa sheegay in ilaa hada ay dawladu lagarabtaaganatahay dadaalo kaladuwan oo isugujira taakulaynta dad iyo duunyaba. Waxayna xuseen in calafkan xooluhu uu waxwayn katary dhanka nafaqada xoolaha islamarkaana ay kahelaan caano badan